Madaxweynaha Somaliland oo wasiir u magacaabay Saleebaan Xaglatoosiye – Radio Daljir
Madaxweynaha Somaliland oo wasiir u magacaabay Saleebaan Xaglatoosiye
Oktoobar 13, 2012 8:26 g 0
Hargeysa Oct 13-Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta (Sabti Oct 13-) ?wasiir u magacaabay Saleebaan Ciise Axmed (Xaglatoosiye).
Xilka cusub ee loo dhiibey Saleebaan Ciise oo loo yaqaan Xaglatoosiye ayaa ah Wasiirka Wasaarada Dib u dejinta ee maamulka Somaliland sida lagu sheegay wareegto kasoo baxday xarunta Madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa.
Jagadan cusub ee maanta loo magacaabay Md Xaglatoosiye ayaa mudooyinkii danbe la saadaalinayey kadib markii uu socdaal ku tegey magaalada Hargeysa Saleebaan Ciise Axmed (Xaglatoosiye).
Xaglatoosiye ayaa ah aqoon yahan kasoo jeeda deegaanka Buuhoodle oo arimaha siyaasada ku biiray sanadii 2008, Xaglatoosiye ayaa xilka Madaxtinimo ee Puntland u tartamay sanadkii 2009 iyadoo looga adkaaday doorashooyinkii Wakhtigaasi dhacay, Markuu ku guuldaraystay Xilka uu ka rabey Puntland Xaglatoosiye wuxuu abaabuley ururkii SSC ee kasoo Jabhadeeyey Sool iyo Cayn.
Saleebaan Xaglatoosiye Horaantii Sanadkan wuxuu ka qaybgalay Shirkii Taleex ee lagu dhisay maamulka Khaatumo halkaasoo uusan ku qancin natiijadii kasoo baxday shirkaasi, Wuxuuna markaas kadib u janjeersaday dhanka Somaliland isagoo kulamo la qaatay madaxda Somaliland ugu danbayna maanta loo magacaabay Wasiirka Wasaarada Dib u dejinta ee Somaliland.
Dadka yaqaan Saleebaan Ciise Axmed (Xaglatoosiye) ayaa tilmaamay inuu yahay nin siyaasadiisu aysan fadhiyin oo isbedel badan Islamarkaana aan lahayn Mabda Siyaasadeed balse doorbida marba meeshuu u arko inay dantiisu ku jirto, iyagoo ka tusaale qaadanaya Siyaaasadaha kala fog ee Xaglatoosiye u kala danbeeyey mudo 5 sano ah oo uu siyaasada kujirey.
Ahlusuna Waljameeca oo wada dadaal lagu heshiisiinayo beelaha Galguduud (Dhegayso)